Mamorona karatra fandraharahana: ny fomba fanaovana azy ireo tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Ny iray amin'ireo endrika fampisehoana ireo mpandraharaha, orinasa, mpiasa tsy miankina ary izay olona manolotra serivisy na vokatra iray dia amin'ny alàlan'ny karatra iray. Ary ny famoronana karatra fandraharahana, sy ny fampiasana azy ireo, dia mora be ankehitriny ary manome anao ny fotoana ahazoan'ny hafa mahazo ny angonao mba hahafahan'izy ireo mifandray aminao raha mila anao izy ireo.
Fa mba hisarihana ny sain'ireto olona ireto dia mila mamorona karatra fandraharahana tena misy akony ianao ary tsy zavatra mitovy amin'ny an'ny hafa izany. Noho izany, androany dia te-hifantoka amin'ny fanomezana hevitra anao izahay hahazoana ny karatra fandraharahana tsara indrindra izay manokatra ny fahafahan'ny asa.
1 Ny angona tsy maintsy ananana hamoronana karatra fandraharahana
2 Tsikelikely hamoronana karatra fandraharahana
2.1 Ny fototry ny karatra fandraharahana
2.2 Ny data rehefa mamorona karatra fandraharahana
3 Aiza no hamoronana karatra fandraharahana
4 Ary izao?
Ny angona tsy maintsy ananana hamoronana karatra fandraharahana
Alohan'ny hanomezanao hevitra, mba hanampiana anao hahafantatra ny famoronana karatra fandraharahana, dia tokony hieritreritra momba ny antontam-baovao tokony ho ao amin'io karatra io ianao. Ataovy ao an-tsaina fa tsy hametraka ny angona rehetra tadiavinao ianao, satria voafetra ny toerana.
Matetika, izay matetika apetraka dia:
Anarana sy anarana. Na ny anaran'ny orinasa. Izy io dia fomba iray hilazana amin'ilay olona hafa hoe iza ianao na hoe iza no iasanao. Raha miasa samirery ianao na kara-pandraharahanao manokana dia hanana ny anaranao amin'ny ankapobeny. Raha asaina orinasa iray dia azo atao ny mandeha voalohany ny anaran'ny orinasa ary ny anao miaraka amin'ny toerana misy anao eo ambany.
Telefaona. Amin'ity tranga ity dia ampidirina ny laharam-pitsipika fa ny finday ihany koa. Indraindray, apetrakao fotsiny ny telefaona findainao satria tsy eo amin'ny toerana voafaritra ianao ary hialana amin'ny fiantsoana anao sy ny tsy fahafahanao mamaly azy amin'io isa io, dia mametraka ny iray izay misy anao foana ianao.
Mailaka Rehefa dinihina fa ny teknolojia vaovao dia nanao banga iray tena lehibe, mahazatra ny karatra fandraharahana ny manana mailaka ahafahan'izy ireo mifandray aminao (satria misy olona tsy tia telefaona nefa manoratra).
Pejy Internet. Azo atao koa ny mampiditra ao anaty karatra fandraharahana satria manokatra varavarana hahafantaran'izy ireo ny marikao amin'ny alàlan'ny Internet ianao.
Toro lalana. Eny eny, ohatra, any amin'ny adiresin'ny orinasa, ny orinasanao ... Alao an-tsaina hoe manana mpanao mofo ianao. Tokony ho fantatrao hoe aiza no misy azy io mba hahitan'izy ireo anao. Toy izany koa raha orinasa, ohatra amin'ny indostrian'ny hazo, tsy maintsy asehonao hoe aiza ianao ka raha mila zavatra izy ireo dia afaka mankany amin'io toerana io (ary tsy miantso anao hanontany).
Data hafa. Ny data hafa izay azo omena amin'ny karatra fandraharahana dia tambajotra sosialy, sary famantarana na solontenan'ny sary (ohatra, ny sary famantarana), sns. Amin'izao fotoana izao dia lamaody ny mampiditra kaody QR izay mamela, raha vao mifantoka amin'ny finday izy ireo, mitondra azy ireo mankany amin'ny tranonkala iray, na tambajotra sosialy, tranokalan'ny orinasa, orinasa na olona, ​​sns.
Mazava ho azy fa azo atao ny mametraka an'ity angona rehetra ity raha misy toerana malalaka ao amin'ilay karatra, fa ny mitondra tahirin-kevitra be loatra dia tsy tokony hatao koa. Aleo tsy mifantoka afa-tsy amin'ny tena ilaina indrindra ary manipy ny hafa. Ary ahoana ny fomba hisafidianana ny iray na ny hafa? Mieritreritra ny sary tianao homena. Ohatra, tsy mitovy izany raha miasa amin'ny maha-mpanoratra an-tserasera ianao (izay tsy ilaina ny mametraka adiresy amin'ny orinasanao fa pejy web sy mailaka), hiasa amin'ny akademia fampiofanana, izay tokony hilazanao hoe aiza ianao dia mifandray amin'ny laharan-telefaona.
Tsikelikely hamoronana karatra fandraharahana
Raha vantany vao voafaritrao izay angon-drakitra ampidirinao, rehefa mamorona karatra fandraharahana ianao dia tsy maintsy manaraka dingana vitsivitsy hahazoana ny valiny tsara indrindra. Ary izao no manaraka:
Ny fototry ny karatra fandraharahana
Amin'ity tranga ity dia tsy tokony hifantoka amin'izay ho lasa fiaviany fotsiny ianao, amin'ny resaka loko, endrika, sns. fa koa ny haben'ny karatra. Tsy misy habe marina ho an'ny karatra fandraharahana; afaka misafidy maromaro, lehibe kokoa na kely kokoa ianao. Miankina amin'ny angona tianao, mety hahaliana ny ambony na ny ambany. Saingy, mba hanomezana hevitra anao dia tokony ho refy mifanaraka tsara amin'ny kitapom-bola na kitapom-batsy izy io, izay tsy mivoaka na tsy sarotra ny miditra ao anaty kiran'ny karatra ananany.
Ny fahafantarana ny habeny dia tsy maintsy mifantoka ianao raha te hanana loko iray ny background, raha misy sary, sary famantarana, kisary ... Ary apetraho amin'ny faritra mety (miankina amin'ny te-hijoro izy mivoaka na tsy voamariky ny olona).
Ny data rehefa mamorona karatra fandraharahana
Manaraka izany dia tsy maintsy ampidirinao ny angona. Mamporisika anao izahay hametraka azy rehetra ary hilalao miaraka amin'izy ireo hanovana ny toerany, ny habeny, sns. hahita ny fomba fijeriny tsara kokoa. Ny karatra mahazatra indrindra dia matetika manana ny anaran'ny olona sy ny adiresy eo afovoany raha ny telefaona sy ny mailaka kosa mandeha amin'ny sisiny. Fa efa nilaza taminay izahay fa tsy misy lalàna voasoratra. Azonao atao izany satria mifanaraka amin'ny orinasanao na ny toetranao.
Ny fototr'izany dia mahatsiaro anao ilay olona manana ny karatrao ary manintona ny sain'izy ireo koa ianao.
Rehefa mamorona karatra fandraharahana dia tena zava-dehibe ny sisin-tany. Ary ny iray amin'ireo lesoka natao dia ny fametrahana tahirin-kevitra sasany ivelan'ireo sisiny ireo, ka rehefa manonta dia tapaka izy ireo ary tsy mahasoa.
Noho izany, rehefa apetrakao ny habeny dia zava-dehibe ny hamoronanao sisiny mba tsy hialanao amin'io toerana io ary hijanona ao anatiny ny zava-dehibe rehetra.
Aiza no hamoronana karatra fandraharahana
Fantatrao ny angona tianao ampidirina, ny dingana tokony hataonao, fa ... ary aiza no hamoronana azy ireo? Raha ny marina, ny famoronana kara-pandraharahana dia tsy mila pejy manokana, na olona iray hikarakarana izany asa izany. Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny fampiasana programa na pejy samihafa. Ohatra:
Teny. Io no be mpampiasa indrindra mamorona karatra «vita an-trano» fa misy valiny tsara. Ny hany zavatra somary voafetra.
Photoshop. Na misy programa fanovana sary afaka manampy anao (ohatra, Gimp). Hanao zavatra mitovy amin'ny Word ianao, amin'ny alàlan'ny fahafaha-manao bebe kokoa fotsiny amin'ny famerenana ny sary napetrakao ho toy ny fototra.
Tranonkala. Amin'ity tranga ity dia misy karazany roa, ny maimaim-poana sy ny karama. Alao antoka fa mamela anao hanao ny karatra ny sasany, fa tsy afaka manonta azy ary lafo be ny vidin'ny fananana azy ireo.
Fampiharana. Ary farany, manana ny safidinao amin'ny rindranasa finday mamela anao hamorona ilay karatra ianao ary avy eo misintona azy handefa azy amin'ny mailakao (na hanonta azy ireo miaraka aminy).
Rehefa manana ny antontan-taratasy miaraka amin'ny karatry ny orinasa ianao, inona no ataonao amin'izany? Manana safidy maromaro ianao:
Azonao atao pirinty ao an-trano izany raha manana taratasy matevina sy manara-penitra ianao (ary avelan'ny mpanontao azy).
Azonao atao ny manonta azy ireo amin'ny orinasa manao karatra fandraharahana. Manolotra ny masin'izy ireo izy ireo hanonta ireo volavola noforoninao.
Azonao atao pirinty amin'ny mpanonta. Tsy izy rehetra, fa ny sasany kosa manana milina afaka manonta amin'ny karazana taratasy misy lanjany samy hafa, ankoatry ny fananana guillotines na cutter hanapaka ny karatra rehefa vita pirinty izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mamorona karatra fandraharahana